Iinyanga zeWuthering_, nguEmily Bronte. Ubuso obu-6 bukaKatherine Earnshaw kunye noHeathcliff | Uncwadi lwangoku
Emily Brontë wazalwa ngomhla onje namhlanje 199 iminyaka. Kunqabile ukuba kuninzi italente yoncwadi Waphinda wamanyana kusapho olunye, kodwa yena noodadewabo Charlotte (UJane Eyre, uShirley) kunye no-Anne (UAgnes Grey, Umqeshi weHolo yeWildfell) babeshiye ngonaphakade. Ityala likaEmily likhwankqisa nangakumbi ekufezekiseni obo buphakade ngenoveli enye, iwuthering Heights (Ngo-1847). Isihloko esifanelekileyo sengqungquthela esathi ekugqibeleni safikelela njenge umxholo wenoveli yothando ephumeleleyo.
Isayinwe phantsi kwegama elingelilo Ellis intsimbi yaza yagculelwa ngabagxeki bexesha, kamva yabonwa njengomzekelo owahlukileyo nzulu kunye nokuqulatha okungaphezulu komphefumlo wothando lwesiNgesi. Ukusekwa kwayo kwiimnyama ezimnyama zaseYorkshire kunye nabalinganiswa bayo abaphambili, okuguqukayo UKatherine Earnshaw kunye nendalo kunye nothando Nguyen, wakhe ongenakulibaleka. Namhlanje sithatha uhambo lwezinye ze ubuso abadlala nabo kumashumi e ukulungelelaniswa kwefilimu kunye nomabonakude esele yenziwe.
Ukubandezeleka kwam okukhulu kulomhlaba ibikukubandezeleka kukaHeathcliff, ndizibonile kwaye ndaziva nganye nganye kwasekuqaleni. Ingcinga enkulu ngobomi bam nguye. Ukuba yonke into itshabalele kwaye wasindiswa, bendiya kuqhubeka nokubakho, kwaye ukuba yonke into ihleli kwaye anyamalale, umhlaba ungamangalisa ngokupheleleyo kum, bekungayi kubonakala kum ukuba ndiyinxalenye yawo. Uthando lwam ngoLinton lunjengamahlamvu ehlathi: ixesha liyakutshintsha, sendisele ndiyazi ukuba ubusika buyayitshintsha imithi. Uthando lwam ngoHeathcliff lufana namatye anzulu angunaphakade, umthombo wolonwabo oluncinci olubonakalayo kodwa oluyimfuneko. UNelly, ndinguHeathcliff, uhlala ehlala engqondweni yam, hayi njengokonwaba, njengoko ndingonwabanga kum, kodwa njengesiqu sam. Ke, sukuphinda uthethe ngokwahlukana kwakhona, akunakwenzeka ...
Yiyo i enye yezona ziqendu ezidumileyo oku kubi kwaye kuyothusa ibali lothando, ukuziphindezela, inzondo kunye nokuphambana phakathi kukaKatherine Earnshaw kunye noHeathcliff. Kwaye leyo iqulethe undoqo olushwankathela ngokuthe ngqo. Uthando oluya kuhlala ludlula ukufa nenzala yakhe.
kunjalo, ubume bayo njengenoveli bunzima kwaye, ngelo xesha, yabothusa abagxeki kunye nabafundi. Akukho lula ukuyifunda Kwaye, njengamaxesha onke, baya kuba ngabona baninzi okanye abo bangakhange bakwazi ukudlula ngaphaya kwamaphepha okuqala. Ke, sibuyela kwakhona kwi ukhetho olukhululekileyo: yabo ulungelelwaniso olwahlukeneyo kunye neenguqulelo kwifilimu nakumabonwakude. Ezi zimbalwa.
1 Iindawo eziphakamileyo zeWuthering (1939)
2 Iindawo eziphakamileyo zeWuthering (1970)
3 Iindawo eziphakamileyo zeWuthering (1992)
4 Iindawo eziphakamileyo zeWuthering (1998)
5 Iindawo eziphakamileyo zeWuthering (2009)
6 Iindawo eziphakamileyo zeWuthering (2011)
iwuthering Heights (1939)
Imveliso yaseNyakatho Melika ekhokelwa nguWilliam Wyler, yayilulungelelwaniso lokuqala lweemovie. Wayenenye yezo zinto zazidibanisa intsebenzo yaseBritane ngelo xesha. U-Lawrence Olivier, Merle Oberon kunye no-David Niven baqamba u-Heathcliffs, u-Katherine no-Edgar Linton ngeyona thoni yexesha.
iwuthering Heights (1970)
IBritane. Yayikhokelwe nguRobert Fuest kwaye wayenenkwenkwezi ngabo babefika ngelo xesha uTimothy Dalton kunye no-Anna Calder-Marshall. Yonyulwa kwiGlobal Globes yeOst Best.
iwuthering Heights (1992)
Kwakhona iBritish. Ngoku sekuyiminyaka engama-25 ukusukela kwinkulumbuso yolu tshintsho ekhokelwe nguPeter Kosminsky. Yayinenkwenkwezi ngabadlali ababini kwimisebenzi emihle kakhulu: i-French Juliette Binoche kunye nesiNgesi uRalph Fiennes. Kwaye ingoma emnandi esele ilungele ukubukwa, yasayinwa ngumqambi waseJapan uRyuichi Sakamoto.
iwuthering Heights (1998)
Umboniso bhanyabhanya waseBritane okhokelwa nguDavid Skynner. Abalinganiswa abaphambili ngu-Orla Blady noRobert Cavanagh. Kwakukho noMatthew Macfadyen omncinci apho njengoHareton Earnshaw, omnye umdlali weqonga wamabali exesha kwaye kamva waduma.
iwuthering Heights (2009)
Iziqendu ezibini zenkonzo kamabonwakude ekhokelwa nguCoky Giedroyc kunye noCharlotte Riley kunye nomntu ongaziwayo uTom Hardy, ababengabantu abatshatileyo ebomini bokwenyani.
iwuthering Heights (2011)
Yayikhokelwe ngu-Andrea Arnold kwaye wayedlala uKaya Scodelario njengoCatherine noJames Howson njengoHeathcliff.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iinyanga zeWuthering_, nguEmily Bronte. 6 ubuso bukaKatherine Earnshaw kunye noHeathcliff